Iimpawu ezi-5 ezisindisiweyo kutshintsho - i-Creativos kwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJose Angel | | ILogos, Izibonelelo
Siyabona ukuba kulo nyaka u-2018 kunye notshintsho oluncinci kunye nolungephi lwamva nje lwe-2017 luvele kwiimpawu ukusuka kuninzi lweemveliso. Lo mfanekiso unento yokwenza nemithombo yeendaba entsha abachaphazeleka kuyo. Kodwa kananjalo, ukunika umbala kwiindlela ezintsha zoluntu lwanamhlanje, ezibonakala ngathi zigcwele luphawu oluninzi.
Kungenxa yoko le nto imifanekiso isiya ngokulula ukwenziwa ngaphandle kwezixhobo ezikhoyo zokwenza ukuba iphuculwe. Kubunzulu bemibala kunye nemilo, ekugqibeleni eyona nto ishiyekileyo incinci. Nangona ezinye iimveliso zingekathethi ngolu tshintshoKungenxa yokuba uphawu lwabo luyaqhubeka ukumela olwanamhlanje okanye ngenxa yokuba bengafumananga endaweni yalo. Okwangoku, ndicinga ukuba akukho namnye oya kufuna utshintsho kubo
4 UMcdonalds uye wangena apha
5 Uphawu lweShell
Uphawu lokuzonwabisa lwabantu abadala olungacacanga, owazalelwa eChicago. I-Heirloom ukusukela ngeentsuku apho uyilo lwe logo lwalubiza ixabiso eliphantsi kwaye luvuya, Umvundla wokudlala wadlala isiqingatha seyure ukuzoba ngo-1953, ngokukaArt Paul, umlawuli wezobugcisa kwimagazini ngelo xesha.
Ilayisensi ye-Playboy yelogo yayo, ukusuka kwimpahla nakwimveliso yobuhle ukuya kwimivalo kunye neeklabhu, ngoku ngomnye wemithombo yabo ephambili yengeniso. Kwaye ngelixa amarhe okuba eli phephancwadi liyavalwa belibhabha ngokukodwa ukusukela oko kwasweleka uHugh Hefner ngo-2014 U-Playboy ubekwe kwindawo yama-42 kuluhlu lwe-150 ephezulu abanikezi layisenisi kwihlabathi liphela. Ayimbi nge logo ekhawulezileyo nexabiso eliphantsi.
Ngaphambili, iilogo zazibonakala zingenatyala. Yayiyinto elula yokuqonda imveliso oza kuyithengisa. Kule mihla, loo nto ayisenziwa nangubani na, kwaye akazami kuyenza yedwa. Namhlanje kuqeshwe izitudiyo zokuphanda kwimarike kunye nemveliso yenkampani, izifundo ezinkulu kwintengiso kunye noyilo ukusondela kwiimpawu zempumelelo. Ezi nkqubo ziyabiza kwaye zithatha ixesha elininzi.
Kwimeko kaNike, ixesha lalincinci kwaye ixabiso, isixa esihlekisayo seedola ezingama-35 zomfundi wasePortland. Kwaye ndiyathetha ngokuhlekisayo, kuba ilogo yeeyure ezimbalwa ibonakala isengqiqweni ukuba ayisiyo mali enkulu ekufuneka ihlawulwe ngomfanekiso, kodwa Ukubona ifuthe lophawu, kuyothusa kancinci.
Ewe kuyinyani, utshintsho olukhulu luvele okoko kwasekwa iCoca-Cola, Kananjalo ngenxa yotshintsho olukhulu ekufuneka belwenzile kumacandelo alo. Kwaye lo mfanekiso utshintshile ngelo xesha xa kwakufuneka aphelise icocaine njengesithako sophawu lwakhe. Kodwa emva kokwakha i-logo yanamhlanje ngo-1886, ayibonanga naluphi na utshintsho olukhulu okanye umahluko obonakalayo.. Olunye uhlengahlengiso oluncinci olungashenxisi uphawu lophawu olunophawu olukhulu kuwo onke amazwe ngaphandle kweCuba neNorth Korea.
UMcdonalds uye wangena apha
Inkampani ekhawulezayo yokutya okukhawulezayo kubonakala ngathi kuyo yonke indawo. Andiqondi ukuba yinto eyenzekileyo nokuba. Kodwa yileyo ukusukela ekudalweni kwayo kwii-60s kunye ngeendawo zokutyela ezingaphezu kwama-36.000 ezisasazwe kumazwe ali-120 khange ube neenguqu kumfanekiso wawo. Umbala omthubi 'M' njengezaphetha ezimbini kwimvelaphi ebomvu uhleli ukusukela ngoko kwaye yiyo loo nto xa sibona indibaniselwano yombala, uphawu luza engqondweni. Akukho mabheji. Ngokuqhelekileyo njengeSitampu seNkululeko, kuye kwaba luphawu olubonakalayo lokutya okukhawulezayo, nangona bekhuphisana.
Uphawu ekunokwenzeka ukuba alwamkelwa ekuqaleni emhlabeni jikelele. Ayinampembelelo efanayo neempawu zokutya okukhawulezayo okanye iiteki esizibeka ezinyaweni rhoqo kusasa. Kodwa ukubaluleka kuyafana okanye kuxhomekeke kubani ocelayo enkulu okanye encinci. I-Shell yasekwa ngo-1897 kunye neminyaka esixhenxe emva kokudalwa kwayo, yafumana ilogo yangoku yophawu kodwa into enzima ngakumbi. Ngo-1971 bazilula zonke izinto ezazisenziwa 'ishiyekile'. Emva kwalo lonke elo xesha, umfanekiso unokubonwa okuhle kwiliso lenyama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iimpawu ezi-5 ezisindisiweyo kutshintsho